Ketchup - esisemqoka umkhiqizo ekhishini nganoma yisiphi uwayehlalise. Naye pizza kanye casseroles, yengezwe isobho kanye borscht, abaningi like pasta noma irayisi ne isoso futhi akekho ucabanga skewers noma inyama eyosiwe ngaphandle kwalo mkhiqizo. Kodwa lokho okuthengiswa amabhodlela amahle - ukude kuphela ufana yangempela tomato sauce. Ngokuvamile umkhiqizo akhangiswe ibhalwe kusuka apula usoso, uviniga, ne ukwengeza stabilizers ahlukahlukene, udayi ngisho nabalawuli. ewusizo okuningi ukuba isoso, kuphekwe ekhaya, ezifana isoso, e multivarka ukwenziwa kusukela imikhiqizo yemvelo. Uma sisondela ukuze ukupheka nge ezinye umcabango, lo mkhiqizo ngeke esikhundleni okumnandi ngempela futhi ngokuphelele desktop yakho nge esidabukisayo usesimweni endaweni yokukhanda.
Ngakho, ake sizwe ukuthi yini kudingeka imikhiqizo ukulungiselela isoso okuzenzela e multivarka. Khetha ezimbalwa utamatisi ezivuthiwe obomvu, thatha ezinhlanu noma eziyisithupha clove esikhulu garlic, umbhangqwana anyanisi aphakathi (olumhlophe noma olubomvu), nenye pepper (mhlawumbe phansi), wezipuni ezimbili noma ezintathu zamafutha omnqumo, kweqembu amakhambi fresh (dill kanye parsley), usawoti. Futhi abasizi esingcono sokulungiselela futhi ukukhonza blender, yebo, wona kanye multivarka.
Utamatisi wami ngokucophelela, ususe Isiqu kanye nommese obukhali, uthathe tincetu ezinkulu. Manje sekuyisikhathi ukusebenzisa amasu ukupheka isoso multivarka. "Yokuwugazinga" ukusebenzisa lolu hlelo ekuqaleni umjikelezo. Preheat indebe, uthele amafutha walala khona tincetu utamatisi. Ngaphandle ukunambitheka dill kanye parsley kungenziwa wanezela phezu likaJese Thyme, sage futhi e-rosemary. Ngemva kokulinda kwamaminithi ambalwa, susa imifino kusukela Multivarki, amakhambi, anyanisi kanye yagarliki nquma. Beka zonke izithako isitsha blender, engeza usawoti kanye pepper ugaye. Kuthatha imizuzu eyishumi kuphela ukuceba ngombala unuke eningi fresh utamatisi okugazingiwe, amakhambi nezinongo. Sicela uqaphele, lokhu isoso e multivarka okuphekiwe, kubukeka ezahlukene kakhulu ukwedlula kokuthengwa inuka! Ngifuna ukudla ngokushesha. Kodwa akunjalo isikhathi gcina lokhu Yummy ebusika, kubalulekile ukuba ubilise futhi ubilise imizuzu embalwa.
Buyela lonke mass emuva Multivarki isitsha adalule imodi "Ukukholisa ', wanezela amanzi ingilazi futhi ushiye ihora elilodwa. Ngalesi sikhathi, abilayo izimbiza nganoma iyiphi indlela oyikhethayo: ku-microwave, kuhhavini noma nje obdaom amanzi abilayo. Ready okuphekiwe ashisayo isoso imidlalo ibhalwe amathini, zamabhodlela Roll up futhi ibheke phansi, ukufuya okuthile ngokufudumala, ezifana ngengubo bavunyelwe kuphole.
Awu, manje wazi indlela yokwenza isoso okuzenzela. Ukuvula embizeni ebusika olunzima, uqiniseka ukuzwa iphunga efanayo ehlobo, amakhambi nemifino ezivuthiwe. Kodwa iyiphi dish ukuze okuyinto wanezela isoso kusukela Multivarki, zuza iphunga ocebile. Cishe, ngawo unyaka olandelayo unquma ukupheka lokhu sauce kabili ukujabulela ku-isitshalo entsha ye utamatisi.
A elula isinkwa recipe kuhhavini
Ukuvuna of Ebusika ama-raspberry - esihlwabusayo futhi unempilo uswidi
Sandwich nge ukwatapheya ikhukhamba
Tuna okusemathinini - ngesisekelo ukulungiswa izitsha ezahlukene
Ice ethubeleza izicathulo: ukubuyekezwa, izici izinhlobo uhambo
Izinyoni zasogwini - nezinto ezidingekayo for ukudoba
Bump ingane ngemuva. Yini okumelwe uyenze?
Njengoba iqembu "Blue Bird" elule amaphiko ayo
Vanessa del Rio: Biography futhi film career
Yini ukunikeza umkhulu usuku lokuzalwa: imibono original isipho
Cornice for amakhethini metal: i Uhlolojikelele, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza obandayo
Iyiphi indima ekwakhiweni ubuntu udlala inkampani (kafushane)